क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्न मदत दिनुहोस् | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
“तँमाथि नजर राखेर म तँलाई सल्लाह दिनेछु।”—भज. ३२:८.
यहोवा आफ्ना सेवकहरूको क्षमता हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलका कस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछ?
अरूमा असल कुरा हेर्ने प्रयास किन गर्नुपर्छ?
जवान वा भर्खरै बप्तिस्मा गरेका भाइहरूलाई क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्न कसरी मदत दिन सक्छौं?
१, २. यहोवा पृथ्वीका आफ्ना सेवकहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
छोराछोरी खेलिरहेको हेर्दा उनीहरूमा भएको क्षमता देखेर आमाबुबा दङ्ग पर्छन्‌। तपाईंले पनि त्यस्तै अनुभव गर्नुभएको छ होला। केही केटाकेटी खेलमा राम्रो हुन सक्छन्‌; केहीलाई भने चित्र कोर्न वा कुनै चिज बनाउन मन पर्छ। छोराछोरीको क्षमता जस्तोसुकै किन नहोस्, आमाबुबा उनीहरूलाई त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्न मदत दिन्छन्‌।
२ यहोवा पनि पृथ्वीका आफ्ना छोराछोरीमा चासो राख्नुहुन्छ। उहाँ आधुनिक समयका आफ्ना सेवकहरूलाई “जाति-जातिका धन-सम्पत्ति”-को रूपमा हेर्नुहुन्छ। (हाग्गै २:७) सङ्गी ख्रीष्टियनहरूमाझ विभिन्न किसिमका क्षमता भएको भाइबहिनी छन्‌। केही भाइहरूले राम्रो भाषण दिन सक्छन्‌; कोही भने कामकुरा व्यवस्थित ढङ्गमा गर्न सिपालु छन्‌। थुप्रै बहिनी विदेशी भाषा सिक्न खप्पिस छन्‌; अरू कतिपयले भने प्रोत्साहन चाहिएकाहरूलाई मदत दिने वा बिरामीको रेखदेख गर्ने सन्दर्भमा राम्रो उदाहरण बसालेका छन्‌। तर तिनीहरू मूल्यवान्‌ हुनुको खास कारण तिनीहरूमा भएको वफादारी र भक्तिले गर्दा हो। (रोमी १६:१, १२) यस्ता भाइबहिनीमाझ हुन पाएकोमा हामी कृतज्ञ छैनौं र?
३. यस लेखमा कस्ता प्रश्नहरू छलफल गर्नेछौं?
३ केही ख्रीष्टियनलाई, विशेषगरि जवान वा भर्खरै बप्तिस्मा गरेका भाइहरूलाई मण्डलीमा आफ्नो कुनै महत्त्व छैन जस्तो लाग्न सक्छ। क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्न उनीहरूलाई कसरी मदत गर्न सक्छौं? यहोवाको अनुकरण गर्दै भाइबहिनीको असल गुणहरू हेर्ने प्रयास गर्नु किन आवश्यक छ?
यहोवा आफ्ना सेवकहरूमा असल कुरा हेर्नुहुन्छ
४, ५. न्यायकर्ता ६:११-१६ को विवरणले यहोवा आफ्ना सेवकहरूमा भएको क्षमता हेर्नुहुन्छ भनेर कसरी देखाउँछ?
४ बाइबलका थुप्रै विवरणले यहोवा आफ्ना सेवकहरूमा भएको असल कुरा मात्र होइन, उनीहरूमा भएको क्षमता पनि हेर्नुहुन्छ भनेर देखाउँछ। उदाहरणको लागि, आफ्ना जनहरूलाई मिद्यानीहरूको हातबाट जोगाउन यहोवाले गिदोनलाई रोज्नुभयो। स्वर्गदूतले यसरी अभिवादन गर्दा गिदोन चकित भए होलान्‌, “तँ वीर मानिस होस् औ परमप्रभु तँसँग हुनुहुन्छ।” तर गिदोन आफूलाई “वीर” ठान्दैनथे। परमेश्वरका मानिसहरूलाई जोगाउन आफू योग्य छैन जस्तो तिनलाई लाग्थ्यो। तर यहोवाको दृष्टिकोण भने फरक थियो। यहोवाले गिदोनलाई योग्य देख्नुभयो। तिनले इस्राएलीहरूलाई जोगाउन सक्छन्‌ भनेर उहाँलाई थाह थियो।—न्यायकर्ता ६:११-१६ पढ्नुहोस्।
५ यहोवाले गिदोनको क्षमता देख्नुभएको थियो। त्यसकारण उहाँले तिनलाई भरोसा गर्नुभयो। गिदोनले भएभरको बल लगाएर गहुँ चुटेको परमेश्वरका स्वर्गदूतले देखेका थिए। तर अर्को कुराले पनि स्वर्गदूतको ध्यान खिच्यो। त्यतिबेला किसानहरूले खुला ठाउँमा अन्न चुट्थे। खुला ठाउँमा हावा चल्ने भएकोले अन्न बत्ताउन सजिलो हुन्थ्यो। तर अचम्मको कुरा, मिद्यानीहरूबाट अन्न लुकाउन गिदोन दाखको कोलमा गहुँ चुट्दै थिए। यहोवाको नजरमा गिदोन मेहनती मात्र थिएनन्‌। तिनी परिस्थिति राम्ररी बुझ्न सक्ने र खतराबाट जोगिनको लागि बुद्धिमान्‌ निर्णय गर्न सक्ने मानिस थिए। यहोवाले तिनको क्षमता देख्नुभयो र तिनलाई तालिम दिनुभयो।
६, ७. (क) केही इस्राएलीले आमोसलाई हेर्ने दृष्टिकोण यहोवाको भन्दा कसरी फरक थियो? (ख) आमोसलाई धेरै कुरा थाह थियो भनेर केले देखाउँछ?
६ यहोवाले भविष्यवक्ता आमोसमा भएको क्षमता पनि याद गर्नुभयो। आमोस साधारण काम गर्थे। उनी गोठाला थिए अनि किम्बुका रूखहरू छिवल्थे। त्यसैले थुप्रै मानिसको नजरमा आमोस सायद नगण्य व्यक्ति थिए। तर मूर्तिपूजामा फसेको दस गोत्रे राज्यलाई सुधार्न यहोवाले आमोसलाई रोज्नुभयो। तर केही इस्राएलीलाई यहोवाले गलत मानिस रोज्नुभयो जस्तो लागेको हुनुपर्छ।—आमोस ७:१४, १५ पढ्नुहोस्।
७ आमोस दुर्गम गाउँमा बस्थे। तैपनि उनलाई वरपरका मानिसहरूको रहनसहन र त्यहाँका शासकहरूबारे राम्ररी थाह थियो। उनले यो कुरा फिरन्ते व्यापारीहरूबाट थाह पाएको हुनुपर्छ। साथै उनलाई इस्राएलको खराब अवस्थाबारे पनि राम्ररी थाह थियो। (आमो. १:६, ९, ११, १३; २:८; ६:४-६) आमोस सिपालु लेखक पनि थिए। उनी आफ्नो लेखमा साधारण मानिसहरूले बुझ्न सक्ने तर सशक्त शब्दहरू चलाउँथे। भ्रष्ट पुजारी अमस्याहलाई दोषी ठहऱ्याउन पनि उनी डराएनन्‌। अमस्याहलाई आफ्नो सन्देश सुनाउन यहोवाले एकदमै सही मान्छे रोज्नुभयो। यहोवाले आमोसमा अरूले त्यत्ति याद नगरेको क्षमता देख्नुभयो।—आमो. ७:१२, १३, १६, १७.
८. (क) यहोवाले दाऊदलाई कस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो? (ख) असक्षम छु भन्ने सोचाइ राख्नेहरूका लागि भजन ३२:८ किन प्रोत्साहनदायी छ?
८ हो, यहोवा आफ्ना प्रत्येक सेवकको क्षमता हेर्नुहुन्छ। उहाँले राजा दाऊदलाई तिनीमाथि “नजर राखेर” डोऱ्याउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। (भजन ३२:८ पढ्नुहोस्) यो कुरा हाम्रो लागि पनि किन प्रोत्साहनदायी छ? हामीलाई ‘म त केही पनि गर्न सक्दिनँ’ जस्तो लाग्ला। तर यहोवा हामीलाई आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै गर्न र हामीले सोच्दै नसोचेको तरिकामा लक्ष्य हासिल गर्न मदत गर्नुहुन्छ। एक जना असल शिक्षकले अनुभवहीन विद्यार्थीलाई पाइला-पाइलामा डोऱ्याउँछ। त्यसैगरि हामीले आफ्नो क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकोस् भनेर यहोवा पनि हामीलाई डोऱ्याउनुहुन्छ। सङ्गी विश्वासीहरू चलाएर यहोवा हामीलाई आफ्नो क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्न मदत दिनुहुन्छ। कसरी?
अरूमा असल कुरा हेर्नुहोस्
९. हामी कसरी अरूको कुरामा पनि ‘ध्यान दिन’ सक्छौं?
९ पावलले सबै ख्रीष्टियनलाई अरूको कुरामा पनि ‘ध्यान दिन’ सल्लाह दिए। (फिलिप्पी २:३, ४ पढ्नुहोस्) यसमा के समावेश छ? भाइबहिनीको क्षमता याद गरेर उनीहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ। हामीले गरेको असल कुराको लागि अरूले प्रशंसा गर्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ? हामीलाई अझै प्रगति गर्न हौस्याउँछ। त्यसैगरि भाइबहिनीले गरिरहेको प्रयासको लागि उनीहरूको प्रशंसा गऱ्यौं भने उनीहरूले यहोवाको सेवामा अझ प्रगति गर्न प्रोत्साहन पाउनेछन्‌।
१०. हामीले विशेषगरि कसलाई ध्यान दिनुपर्छ?
१० हामीले विशेषगरि कसलाई ध्यान दिनुपर्छ? हुन त हामी सबैलाई अरूले चासो देखाएको मनपर्छ। तर विशेषगरि जवान र भर्खरै बप्तिस्मा गरेका भाइहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। उनीहरूले पनि मण्डलीमा योगदान पुऱ्याइरहेका छन्‌ भनेर महसुस गराउनुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरूले परमेश्वरका जनहरूमाझ आफ्नो पनि महत्त्व छ भनेर बुझ्नेछन्‌। ती भाइहरूलाई थप जिम्मेवारीका लागि योग्य हुन बाइबलले प्रोत्साहन दिन्छ। (१ तिमो. ३:१) तर उनीहरूले मण्डलीमा गरिरहेको असल कामको कदर गरेनौं भने यहोवाको सेवामा अझ गर्ने उनीहरूको जोस सेलाउन सक्छ।
११. (क) लुडोभिकले एक जवान भाइलाई लजालु स्वभाव हटाउन कसरी मदत दिए? (ख) यो अनुभवबाट तपाईंले के सिक्नुभयो?
११ लुडोभिक नाम गरेका एल्डरलाई विचार गरौं। जवान छँदा उनलाई पनि भाइबहिनीले निष्कपट चासो देखाएका थिए। उनी भन्छन्‌, “कुनै भाइलाई निष्कपट चासो देखायो भने तिनले छिट्टै प्रगति गर्न सक्छन्‌।” लजालु स्वभावका एक जवान भाइ जुलियानबारे लुडोभिक यसो भन्छन्‌, “जुलियान मण्डलीमा अझ धेरै गर्न चाहन्थे तर कहिलेकाहीं अलमल्लमा पर्थे अनि हडबडिन्थे। तर तिनी धेरै दयालु थिए र मण्डलीका भाइबहिनीलाई मदत गर्न साँच्चै इच्छुक थिए। त्यसैले जुलियानको आलोचना गर्नुको साटो तिनको राम्रो पक्षमा ध्यान दिएँ र तिनलाई प्रोत्साहन दिएँ।” पछि जुलियान सहायक सेवक भए र अहिले नियमित अग्रगामीको रूपमा सेवा गर्दै छन्‌।
१२. क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्न कसैलाई मदत दिन चाहन्छौं भने के गर्नुपर्छ? उदाहरण दिनुहोस्।
१२ क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्न कसैलाई मदत दिन चाहन्छौं भने हामीले उनलाई राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ। उनको कमीकमजोरीमा होइन, उनमा भएको असल गुण र क्षमतामा ध्यान दिनुपर्छ। येशूले पनि प्रेषित पत्रुसमा भएको असल कुरामा ध्यान दिनुभयो। पत्रुस कुनै समय हडबडे स्वभावका थिए, तैपनि येशूले तिनलाई केफास वा पत्रुस भन्ने नाम दिनुभयो, जसको अर्थ हो, चट्टान। यसरी येशूले पत्रुस चट्टानजस्तै स्थिर हुनेछन्‌ भनेर बताउनुभयो।—यूह. १:४२.
१३, १४. (क) बर्णाबासले मर्कूसलाई कसरी हेरे? (ख) मर्कूसले जस्तै एक जवान भाइले कस्तो मदत पाए? (शीर्षकमाथिको तस्बिर हेर्नुहोस्)
१३ अब बर्णाबास र मर्कूसलाई विचार गरौं। (प्रेषि. १२:२५) पावल र बर्णाबाससँग मिसनरी यात्रामा जाँदा मर्कूसले उनीहरूको सहयोगीको रूपमा काम गरे। तर पाम्फिलिया पुगेपछि मर्कूसले उनीहरूलाई छोडेर गए। पावल र बर्णाबास दुई जनाले मात्र खतरनाक इलाका भएर यात्रा गर्नुपऱ्यो। (प्रेषि. १३:५, १३) पछि बर्णाबासले के गरे? तिनले मर्कूसमा भएको असल गुणहरूमा ध्यान दिएको हुनुपर्छ, कमीकमजोरीमा होइन। तिनले मर्कूसलाई भरोसा गर्न नसकिने मान्छे ठानेनन्‌। बरु मर्कूसलाई तालिम दिइरहे। पछि उनी परिपक्व ख्रीष्टियन बने। (प्रेषि. १५:३७-३९) वर्षौंपछि मर्कूस पावललाई रोममा सघाउँदै थिए। त्यतिबेला पावल झ्यालखानामा थिए। कलस्सीका भाइबहिनीलाई पत्र लेख्दा पावलले मर्कूसको विषयमा पनि उल्लेख गरे। (कल. ४:१०) पछि पावलले मर्कूसको मदत चाहिएको कुरासमेत बताए। यो कुरा सुन्दा बर्णाबास कत्ति खुसी भए होलान्‌!—२ तिमो. ४:११.
१४ अलेक्जेन्डर नाम गरेका एल्डर एक जना भाइबाट पाएको मदतबारे यसो भन्छन्‌, “जवान छँदा समूहमा प्रार्थना गर्दा मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो। एक जना एल्डरले मलाई प्रार्थनाको लागि पहिल्यै तयारी गर्न र ढुक्क भएर प्रार्थना गर्न सिकाउनुभयो। उहाँले मलाई क्षेत्र सेवाको सभामा प्रार्थना गर्ने मौका दिइरहनुभयो। बिस्तारै मैले निर्धक्क भएर प्रार्थना गर्न सिकें।”
१५. पावलले आफ्ना भाइबहिनीको मोल गरेको कुरा कसरी देखाए?
१५ कुनै भाइ वा बहिनीको असल गुण देख्दा के हामी त्यसको मोल गर्छौं? पावल पनि भाइबहिनीमा भएको असल गुणहरूको मोल गर्थे। रोमी अध्याय १६ मा असल गुण देखाएका २० जनाभन्दा धेरै भाइबहिनीको पावलले प्रशंसा गरेका छन्‌। (रोमी १६:३-७, १३) जस्तै, एन्ड्रोनिकस र युनियस पावलभन्दा पहिला ख्रीष्टको चेला बनेका थिए र उनीहरू सहनशील थिए। त्यसकारण पावलले उनीहरूको प्रशंसा गरे। साथै पावलले रूफसकी आमाबाट पाएको मायालु हेरचाहबारे पनि उल्लेख गरे।
फ्रेडरिकले (बायाँ) रीकोलाई यहोवाको सेवामा लागिरहन प्रोत्साहन दिए (अनुच्छेद १६ हेर्नुहोस्)
१६. जवान भाइबहिनीको किन प्रशंसा गर्नुपर्छ?
१६ मनैदेखि भाइबहिनीको प्रशंसा गर्नु राम्रो हो। फ्रान्सका एक जवान भाइ रीकोलाई विचार गरौं। उनका बुबा यहोवाको साक्षी थिएनन्‌। तिनी रीकोले बप्तिस्मा गरेको चाहँदैनथे। त्यसकारण रीको निराश भए। उनलाई वयस्क नहोउन्जेल बप्तिस्माको लागि कुर्नुपर्ने हो कि भनेर चिन्ता लागिरहेको थियो। विश्वासको कारण स्कूलका साथीहरूले पनि उनलाई गिज्याउँथे। त्यसकारण उनलाई खल्लो लाग्थ्यो। फ्रेडरिक नाम गरेका एल्डरले रीकोको प्रशंसा गरे; साहसी भएर आफ्नो विश्वासबारे बताएकोले नै त्यस्तो विरोध आएको हो भने। यस्तो प्रशंसाले गर्दा उन्नति गरिरहने उनको सङ्कल्प अझ बलियो भयो। उनले बुबासितको सम्बन्ध पनि राम्रो बनाए। बाह्र वर्षको उमेरमा रीकोले बप्तिस्मा गरे।
जेरोमले (दायाँ) रायनलाई मिसनरी सेवा गर्ने लक्ष्य राख्न मदत दिए (अनुच्छेद १७ हेर्नुहोस्)
१७. (क) भाइहरूलाई उन्नति गर्न कसरी मदत दिन सक्छौं? (ख) एक जना मिसनरीले जवान भाइहरूलाई कसरी मदत गरेका छन्‌? परिणाम कस्तो भएको छ?
१७ भाइबहिनीले गरेको असल कामको प्रशंसा गऱ्यौं भने उनीहरू यहोवाको सेवामा अझ धेरै गर्न उत्प्रेरित हुनेछन्‌। फ्रान्स बेथेलमा लामो समयदेखि सेवा गरिरहेकी सेलिना * मण्डलीका बहिनीहरूले पनि भाइहरूको प्रशंसा गर्न सक्छन्‌ भन्छिन्‌। तिनलाई त्यसो गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी नै हो जस्तो लाग्छ। (हितो. ३:२७) बहिनीहरूले स-सानो कुरा पनि याद गरेर प्रशंसा गर्न सक्छन्‌। त्यसले भाइहरूलाई अझ प्रोत्साहन दिन्छ। फ्रेन्च गुयनामा मिसनरी सेवा गरिरहेका जेरोमलाई पनि विचार गर्नुहोस्। तिनी मण्डलीका जवान भाइहरूलाई मिसनरी सेवा गर्ने लक्ष्य राख्न मदत गर्छन्‌। तिनी भन्छन्‌, “जवान भाइहरूले प्रचारको कुनै खास पक्षमा गरेको प्रयास वा राम्रो टिप्पणीको लागि प्रशंसा गर्दा उनीहरू अझ निर्धक्क हुन सक्छन्‌ र आफ्नो क्षमता बढाउन सक्छन्‌।”
१८. जवान भाइहरूसँग काम गर्दा कस्तो फाइदा हुन्छ?
१८ सँगै काम गरेर अनि कुनै जिम्मेवारी दिएर पनि भाइहरूलाई उन्नति गर्न प्रोत्साहन दिन सक्छौं। उदाहरणको लागि, मण्डलीका कुनै वृद्ध भाइबहिनीको घरमा कम्प्युटर नहुन सक्छ। त्यसकारण एल्डरले कुनै जवान भाइलाई ती वृद्धहरूको लागि मदतकारी हुने जानकारी हाम्रो वेब साइटबाट छाप्न लगाउन सक्छन्‌। अथवा तपाईं राज्यभवनको सरसफाइ वा मर्मतसम्भार गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै जवान भाइलाई सँगै काम गर्न बोलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी काम गर्दा ती भाइहरूलाई राम्ररी नियाल्ने, उनीहरूको प्रशंसा गर्ने र उनीहरूको विचार बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ।—हितो. १५:२३.
भविष्यलाई विचार गरेर योजना बनाउनुहोस्
१९, २०. उन्नति गर्न भाइहरूलाई किन मदत गर्नुपर्छ?
१९ यहोवाले यहोशूलाई इस्राएलीहरूको नाइके नियुक्त गर्नुभयो। त्यतिबेला उहाँले यहोशूलाई ‘प्रोत्साहन दिन’ र ‘साहसिलो बनाउन’ मोशालाई अह्राउनुभयो। (व्यवस्था ३:२८ पढ्नुहोस्) आज पनि थुप्रै मानिस यहोवाको विश्वव्यापी मण्डलीमा ओइरिरहेका छन्‌। एल्डरहरूले मात्र होइन हामी सबैले जवान भाइहरूलाई र भर्खरै बप्तिस्मा गरेकाहरूलाई क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्न मदत दिनुपर्छ। यसो गर्दा धेरैभन्दा धेरै भाइहरूले पूर्ण-समय सेवा अँगाल्नेछन्‌ र अरू थुप्रैचाहिं “सिकाउन योग्य” हुनेछन्‌।—२ तिमो. २:२.
२० हामी ठूलो मण्डलीमा सेवा गरिरहेका हौं वा सानो समूहमा, भविष्यलाई विचार गरेर योजना बनाऔं। यहोवाको अनुकरण गर्दै अरूमा असल कुरा हेरिरहौं।